Waxa lagu arko Jaén: Dhaxalka taallo iyo agagaaraha dabiiciga ah | Wararka Safarka
Luis Martinez | 10/01/2022 15:30 | Magaalooyinka Spain, Guides
Hadaad yaabto waxa lagu arko Jaén Sababtoo ah waxaad rabtaa inaad booqato magaalada Andalusian, waxaan kuu sheegi doonaa inay leedahay dhaxal taalo cajiib ah. Tani waa la waafajiyay ilaa taariikhda dheer, oo ay ku jiraan, ugu yaraan, laga soo bilaabo wakhtiyadii Iberian, sida caddaynta goobta qadiimiga ah ee Buurta Plaza de Armas ee Puente Tablas.
Later, Jaén waxay noqon doontaa caasimadda Boqortooyada Quduuska ah ilaa qarnigii XNUMXaad. Laakiin, marka lagu daro, magaalada Andalusian waxay ku taal deegaan mudnaanta leh, oo ku taal cagta Santa Catalina Hill iyo buurta Jabalcuz, kaas oo aad ku leedahay waddooyin badan oo socod ah, oo ay ku hareeraysan yihiin geedo saytuun ah. Haddii aad rabto inaad ogaato waxaad ku arki lahayd Jaén, waxaanu kugu dhiirigelinaynaa inaad sii wadato akhriska.
1 Cathedral of qiyaasta
2 Macbadyo kale iyo dhismayaal diimeed oo lagu arko Jaén
3 Qubeyska Carabta iyo Qasriga Count ee Villardompardo
4 Guryo kale oo aad ku arki karto Jaén
5 Qalcadda Santa Catalina
7 Matxafka Iberian
8 Isbitaalka Hore ee San Juan de Dios
9 Jardiinooyinka iyo agagaaraha Jaén
Cathedral of qiyaasta
Cathedral of Assumption ee Jaén
Waa macbad soo jiidasho leh Habka Renaissance, inkasta oo wejigeedu yahay mid ka mid ah dahabka Baroque ee Isbaanishka. Lagu dhawaaqay Taallada Taariikhiga ah ee Dhaqanka, dhismihiisa waxa uu bilaabmay qarnigii XNUMXaad wuxuuna socday qarniyadii soo socda. Intaa waxaa dheer, ka dib dhulgariirkii Lisboa, waxay ahayd in la soo celiyo. Laakin, haddii ay bannaankeedu qurux badan yahay, waxa aad ka sii yaab badan waxa aad ku arki karto gudaha.
Tusaale ahaan, hobolada neoclassical, taas oo ah mid ka mid ah kuwa ugu weyn ee Spain, iyo guriga cutubka, shaqada Andres de Vandelvira. Laakiin, dhammaan ka sarreeya, waa inaad booqataa gudaha gudaha Relic ee Wajiga Quduuska ah, tixgeliyey wejiga runta ah ee Ciise Masiix. Waa shiraacii ay Veronica ku engejin lahayd wejigii Rabbiga inta lagu jiro Jacaylka.
Macbadyo kale iyo dhismayaal diimeed oo lagu arko Jaén
Basilica ee San Ildefonso
Cathedral-ka agtiisa, waxaad leedahay dhismayaal kale oo diimeed oo badan oo qurux badan oo ku yaal magaalada Andalusian. Waxaa ka mid ah Basilica ee San Ildefonso, ee qaabka Gothic iyo in ay ku jiraan sawirka bikrada ee Chapel, co-ilaaliye ee Jaén. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa inaad booqato kaniisadaha Saint mary magdalene, ee Saint John Baptist, loo arko ka ugu da'da weyn magaalada, ama Saint Andrew, kaas oo ku yaala Quduuska ah Chapel, qol duco ah oo loogu tala galay ra'yiga daahirka ah.
Dhanka kale, waxaa jira dhismayaal convents oo lagu booqan karo Jaén. Waxaa ka mid ahaa Convent Royal ee Santo Domingo, xarunta hadda ee kaydka taariikhiga ah ee gobolka. Wajigeeda waa Mannerist qaab ahaan waxayna leedahay kaniisad la dhisay qarnigii XNUMXaad. Laakiin la yaabka ugu weyn ee aad ku arki karto keniisad this waa xeryahooda, loo arkaa ugu weyn ee magaalada iyo taas oo ay lixdan tiirar Tuscan iyo siddeed iyo labaatan geesood semi-circular arches taagan.
Qubeyska Carabta iyo Qasriga Count ee Villardompardo
Qubeyska Carabta ee Jaen
Qasrigan oo la dhisay qarnigii XNUMX-aad ayaa ah mid yaab leh Renaissance, inkastoo albaabkeeda ugu weyn la sameeyay qarnigii XNUMX-aad. Gudaha, barxadda dhexe oo leh sawir labajibbaaran oo tiirar ah ayaa taagan oo qolalka kala duwan ee dhismaha ay u furan yihiin.
Sidoo kale, qaybta hoose ee qasriga waxaad booqan kartaa duugga Maydhashada carabta, oo loo arko inay tahay tan ugu weyn ee lagu ilaaliyo Yurub, oo leh 450 mitir oo laba jibbaaran. Shukaansiga laga soo bilaabo qarnigii XNUMX-aad, waxay leeyihiin qolal badan oo la qurxiyey iyagoo raacaya canons of Almoravid iyo Almohad art.
Waxa kale oo ku yaal qasriga Villardompardo, laba madxaf oo aad xiisaynayso inaad aragto. Ma yihiin Naive Art International, ku salaysan ururinta rinjiile Manuel Moralesiyo ee Fanka iyo Kastamka caanka ah, kaas oo leh qiimo qawmiyadeed oo muhiim ah.
Guryo kale oo aad ku arki karto Jaén
Palace ee Vilches ah
Villardompardo maaha dhismaha kaliya ee palatin ee aad ku arki karto Jaén. Dhab ahaantii, waxaan kugula talineynaa inaadan seegin qiimaha qaaliga ah Palace ee Vilches ah, oo leh wejigeeda Renaissance ee cajiibka ah; ah ee Viscount de los Villares ama Count-Duke, oo ku ag taal keniisad baroque ee Santa Teresa de Jesús; ah qasriga gobolka, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad oo leh ururinta muhiimka ah ee rinjiyeynta, ama Aqalka Magaalada, Kaas oo ay dhiirigelisay tii hore, balse ah jawharad qurux badan oo dhismihii qarnigii XNUMX-aad ah.
Laakiin, laga yaabee, qasriga ugu asalka ah uguna cajiibsan ee Jaén waa ee Constable Iranzo qaabkeeda mudejar ee cajiibka ah. Tusaalaha badbaadada fanka muslimiinta ka dib qabsashadii Masiixiyiinta ee magaalada, haddii aad awooddo, booqo hoolka cajiibka ah ee aljarfe ama saqafka leh alwaax xardhan. Hadda, waa xarunta dhexe ee maktabadda degmada.
Qalcadda Santa Catalina
Qalcaddii Santa Catalina
Waxay u badan tahay inay tahay taallada ugu caansan Jaén. Waxay ku taallaa buurta isku magaca ah, waxaana la dhisay wakhtiyadii dhexe ee haraaga qalcaddii hore ee Carabta. Dhab ahaantii, dhismuhu wuxuu leeyahay, ku xiga, laba xero oo kale: ah Old Alcazar iyo waan furay, inkastoo qayb wanaagsan oo ka mid ah haraagaas laga saaray si loo dhiso parador de turismo qaran.
Meesha qalcaddu ku taal ayaa dhererkeedu yahay afartan mitir, gudahana waxay ku leedahay xarun turjubaan. Laakiin, waxaas oo dhan ka sarreeya, waxaad ka leedahay aragtiyo cajiib ah oo ku saabsan Jaén iyo geedaha saytuunka ah iyo buuraha ku hareeraysan magaalada.
Sidoo kale, kooxda dhexdeeda, Chapel ee Saint Catherine ee Alexandria, oo la dhisay intii u dhaxaysay qarniyadii XNUMXaad iyo XNUMXaad ee qaabka Gothic, iyo iskutallaabta, oo ku taal meesha ugu sarreysa ee buurta oo calaamad u ah magaalada. Waxa kale oo aad ka akhrisan kartaa sonnet qurux badan oo uu leeyahay gabayaaga Jaen Antonio Almonds Aguilar.
Menorah ee fagaaraha Agoomaha
Magaaladu waxay lahayd joogitaanka Cibraaniga muddo laba iyo toban qarni ah iyo jaangooyooyinka waddooyinka cidhiidhiga ah iyo kuwa dhaadheer ee ka kooban qaybta Yuhuudda ayaa qayb ka ah shabakada Wadooyinka Sefarad ku xiga magaalooyinka sida Cordoba, Ávila, Béjar ama Calahorra. Waxaa sidoo kale loo yaqaan Xaafadda Santa Cruz iyo, ka mid ah dhismooyinkeeda aadka u wanaagsan waxaa ka mid ah guriga Ibn Shaprut, Carnicerías, kuwaas oo hoostooda ay ku yaalaan musqulaha Naranjo, menorah ee Plaza de los Orfanos iyo hadhaagii albaabka Baeza, mid ka mid ah albaabada laga soo galo derbiga.
Laakiin, laga yaabee, shayga ugu caansan xaafaddan waa Monastery Royal ee Santa Clara, Qarnigii XNUMXaad. Si xiiso leh, waxaan kuu sheegaynaa in haweenka guursanaya ay ugu deeqaan beedka Miskiinka Clare nuns si ay waqti fiican ugu qaataan maalinta arooskooda.
Qaybaha Matxafka Iberian ee Jaén
Waa booqasho kale oo muhiim ah oo ku taal Jaén, sida ay ku taal ururinta ugu weyn ee farshaxanka Iberian ee adduunka. Waxay ka kooban tahay qaybo ka mid ah goobaha qadiimiga ah ee gobolka oo dhan. Waxaa ka mid ah kuwa ka soo baxa Buundada Tablas, oo aan hore u soo sheegnay. Laakiin sidoo kale waxay ku biiriyeen waxyaabo badan oo ah Ciyaar Cad gudaha Porcuna, laga bilaabo Castulo ee Linares, ka Buur Shimbir Huelma ama tan Watchtower ee Fort of King.
Isbitaalka Hore ee San Juan de Dios
Cloister of the Hospital de San Juan de Dios
Waxaan ku dhamayn doonaa socdaalkayaga magaalada dhismahan quruxda badan ee la dhisay qarnigii XNUMXaad ka dibna waxaan sii wadi doonaa inaan kuu sheego agagaarka Jaén. Waxay u taagan tahay wejigeedii dambe ee Gothic iyo barxaddii quruxda Andalusian-Renaissance-ka ee quruxda badnayd, muuqaal-quruxsan oo leh isha dhexe. Isbitaalka agtiisa, waxaad arki kartaa a kaniisada dib loo soo celiyay, laakiin waxay sii haysanaysaa wejigeeda qarnigii XNUMXaad.
Jardiinooyinka iyo agagaaraha Jaén
Alameda de los Capuchinos ee Jaén
Sida aan sheegnay, magaalada Andalusian waxay leedahay goob mudnaan leh iyo nawaaxi aad u qurux badan oo aad ka dhigi karto mid xiiso leh. wadiiqooyinka socodka iyo baaskiilka. Waxaa ka mid ah midda dhex mara buurta Jabalcuz, kuwaas oo aan hore u soo sheegnay oo u kala goosha geedaha geedaha iyo geedaha saytuunka. Haddii aad dhex socoto, waxaad sidoo kale arki doontaa dhismaha Isboorti hore iyo beeraheedii, koox dhismeyaal ah oo qiimo weyn ku leh dhismeyaal la dhisay bilowgii qarnigii XNUMX-aad.
Jidka dhex mara magaalada qadiimka ah wuxuu kaloo bixiyaa muuqaalo qurux badan Gidaarka magaalada dhexe, mid ka mid ah u horseedaysa aagga madadaalada ee Chimba Cross, halkaas oo uu jiro fasalka dabiiciga ah, iyo kan aado Kaymaha geedaha ee Neveral, oo u dhow qalcaddii Santa Catalina.
Si kastaba ha ahaatee, maaha inaad ka tagto Jaén si aad ugu raaxaysato dabeecadda. Magaaladu waxay leedahay jardiinooyin dhowr ah, qaar badan oo ka mid ah, marka lagu daro, qurux badan. Waxaa laga yaabaa in ugu quruxda badan waa Alameda de Capuchinos, kaas oo soo taxnaa ilaa qarnigii XNUMX-aad oo leh beero u eg Renaissance iyo dariiq dhexe oo loogu talagalay raacitaanka gaadiidka. Aad ugu dhow isaga ayaa ah Convent of the Franciscan Conception ama de las Bernardas, oo la dhisay qarnigii XNUMXaad.
The Beerta Concordia, taas oo ku taal agteeda taallo dagaal, oo loogu talagalay kuwa Las Navas de Tolosa iyo Bailén oo uu sameeyay sawir-qaadaha Jaén Hyacinth Higueras in 1910.
Laakiin waxaa laga yaabaa in beerta ugu quruxda badan ee Jaén ay tahay Andrés de Valdenvira kaas oo leh boqol kun oo mitir oo laba jibbaaran, waana tan ugu weyn dhammaan Andalus. Waxay leedahay in ka badan laba kun oo nooc oo dhir ah, balliyo, ilo, amphitheater iyo xitaa garoon kubbadda cagta ah. Waa sambabada ugu weyn ee magaalada iyo sidoo kale meel aad ku qaban karto dhaqdhaqaaqyada ciyaaraha.
Gebagebadii, waanu ka hadalnay waxa lagu arko Jaén. Sidaad aragteen, magaalada Andalus waxay ku siinaysaa meelo badan oo soo jiidasho leh. Waxay leedahay taallooyin heersare ah, dabeecad mudnaan leh iyo animation badan. Tan ku saabsan, marka lagu daro, waxaad ku raaxaysan kartaa a gastronomy cajiib ah iyo dhowr ah meelaha tapas, classic ah in Jaén. Suxuunta caadiga ah ee aad ka dhadhamin karto magaalada Andalusian, waxaa jira cuntooyin macaan sida saladh basbaas la dubay, pipirrana, isbinaajka asparagus ee Jaén-style, digirta iyo fuud aubergine ama koodka basasha. Adigoon iloobin macmacaanka sida pestiños, alfajores ama ochíos. Miyaadan rabin inaad ku raaxaysato caasimadan quruxda badan ee Andalus?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Magaalooyinka Spain » Waxa lagu arko Jaén